Salman Khan oo dib u xasuustay markii ugu horreysay ee uu la kulmay Katrina Kaif, muxuuse ka aaminsanaa? | Filimside.net
Home » Bollywood News » Salman Khan oo dib u xasuustay markii ugu horreysay ee uu la kulmay Katrina Kaif, muxuuse ka aaminsanaa?
Salman Khan oo dib u xasuustay markii ugu horreysay ee uu la kulmay Katrina Kaif, muxuuse ka aaminsanaa?
Salman Khan iyo Katrina Kaif muddo dheer ayey isgaranayaan, waxayna soo yeesheen xiriiro nuucyo badan ah, markii hore wuxuu xiriirkoodu kasoo bilowday saaxiibnimo, ka dibna jaceyl ayey wadaageen, iyagoo haatan ah laba shaqsi oo xiriir jaceyl horay usoo dhexmaray hadana saaxiibo caadi ah.
Filimka Tiger Zinda Hai ee Director Ali Abbas Zafar kaasoo la daawan doono dabayaaqada bishaan December ayaa markale shaashadda ku mideyn doona Salman Khan iyo Katrina Kaif.
Salman oo haatan bilaabay xayeysiinta uu u sameynayo filimkiisa, ayaana wax laga weydiiyey xasuustiisa uu ka heysto kulankiisii ugu horreeyey ee uu la yeeshay Katrina Kaif, wuxuuna ku jawaabay: “Wuxuu ahaa kulan daqiiqado yar qaatay. Quruxdeeda ayaa kaamil aheyd, waxaana ku fikiray inay tahay gabadha ugu quruxda badan adduunka ee aan abid arko.
“Balse Katrina Kaif markaas waa ay garaneysay dhammaan gabdhaha aan walaalaha nahay, sidoo kale asxaabteyda oo dhan ayey garanayesay, laakiin aniga ima aysan aqoon”.
Salman iyo Katrina ayaa shan sanno ka dib midoobay, markii ugu dambeysay ee ay labadoodu filim wadasameeyaan waxay aheyd 2012kii, markaasoo ay wadasameeyeen filimkii Ek Tha Tiger ee Director Kabir Khan.
Waxaa Aqrisay 805
2 Responses to Salman Khan oo dib u xasuustay markii ugu horreysay ee uu la kulmay Katrina Kaif, muxuuse ka aaminsanaa?
filimside tartan kii ajey iyo hiritik ee semi finalka maxaad usoo gaba gabayn weydeen oo aad finalkii u qaban weydeen.
walalkeen waa lasoo gabagabeyna sida ugu dhaqsiyaha badan